”Halkan derisku waa kala duwan yihiin” - Asylum in Finland
Ninkan Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda wuxuu deganaa Finland muddo ka badan 20 sano. Waxey isaga la tahay in haddii Finland laga raadiyo wax aan wanaagsaneyn, ay tahay xirxirnaanshaha dadka.
”Soomaaliya derisku waa qeyb kamid ah qoyska, carruurta wadajir ayaa loo barbaariyaa, waa la wada ilaaliyaa. Derisku digitaan la’aan ayeey cuntada u wada cunaan. Xiriirku waa mid dhow oo diiran”, sidaas ayuu hadalkiisa ku billaabay.
Sida uu ninkani qabo Finland arrintu sidaas waa ka duwan tahay
”Haddii aad xittaa salaanto deriska, wax jawaab ah kama maqleysid, ku casuumid guriga warkeeda iskaba daaye. Muddoo dheer ayaan Finland deganaa oo aan isku dayay, laakiin illaa iyo hadda deriska kama helin saaxiibo. Marka aan arrintan u sheego saaxibadeyda deggan Soomaaliya, waxaa ku adag in ay warkeyga rumeystaan.”
Nin Afghanistan ah oo Finland muddo dheer deganaa ayaa wuxuu si gaar ah ugu qaddariyaa Finnishka daacadnimadooda, iyo in ay ka soo baxaan waxyaabaha lagu ballamo. Sida uu qabo shaqaalaha dowladeedka iyo dadka caadiga ahba waa arrin ay sameeyaan. Si kastoo ay ahaatee sameysashada xiriir gaar ah wuxuu u baahan yahay dulqaad.
”Qofka Finnishka ah wuxuu rabaa in uu si tartiib ah qofka u barta, fiiriyo qofka uu yahay kaddibna go’aansado in uu saaxiib ka dhiganayo iyo in kale”, sidaas ayuu ku cabiray.
Nin kale oo Afghanistan ka soo jeeda ayaa isna arrinta la yaaban.
”Qofna weli goobta shaqada ee aan joogo iiguma imaanin imana weydiinin qofka an ahay. Waddankaygi arrintu waa ka duwan tahay, qofna sidan af gaabida ah uma dhaqmo.”
Isbarbardhig ahaan qaawanaantu waa dabiici
Arrimaha qaar ee ku jira dhaqanka Finnishka waxey si gaar ah ugu adkaan kartaa in ay fahmaan dadka ka yimaado wadamada Islaamka ah. Dadka Finnishka ah tusaale ahaan qaawanaantu waxey u tahay arrin iska dabiici ah. Finland xittaa qaawanaan la isagama socdo – marka laga reebo sawnada oo ay dadka Finnishka ah kula qubeystan ka sokow qoyska saaxiibada shaqada iyo hiwaayadda.
”Sawnada Finnishku waa la yaab, waayo waa in surwaalka la iska siibo. Waa arrin weyn, waayo dhaqanka Islaamka sida uu qabo qofna dharka isagama siibo dadka caadiga ah hortooda”, nin Afghanistan asal ahaan ka soo jeeda oo Finland deggan ayaa sidaas sheegay.
Tusaale ahaan goobaha qubeyska iyo sawnada ee hoolashada dabaasha ee dadweynaha qaawanaan ayaa lagula dhex socdaa. Kahor inta uusan qofku gelin berkadda dabaasha waa in uu gebi ahaan isdhaqaa.
”Qaawanaanta Finland waa mid ka duwan tan meelaha kale, xittaa Kurdida inkastoo aanan aheyn dad si gaar ah diinta ugu dheggan. Hoolka dabaasha xittaa ma galno innagoo wada qaawan, sidaas darteed ayeey waxyaabaha aan ku aragnaa Finland noqon karaan wax aad loola yaabo”, nin Kurdi ah ayaa sidaas yiri.
Dumarka iyo raggu xittaa Finland sawnada wey isla geli karaan. Inkastoo uu ninku naagta ku arko sawnada iyada oo shukumaan oo kaliya xiran amaba wada qaawan macnaheedu ma ahan in ay arrintu galmo la xiriirto. Waa hab lagu qubeysto waana in la xushmeeyaa.
Khamriga waa la isku dejiyaa – mararka qaarna si xad dhaaf
Finnishku waxey kaalinta saddexaad ee khamri cabista uga jiraan wadamada Yurub waxaa ka horeeya Ingiriiska iyo Danmark. Dadka qaar cabitaanku dhib ayuu ku yahay, dadka badankiisna waa hab ay ku raaxeystaan iskuna dejinayaan. Qofka ka yimaada dhaqan gebi ahaanba ka duwan midkan, cabista khamri badan waxey ku noqon kartaa dhibaato.
”Billoowgi hore layaab ayeey aniga igu aheyd, sababtoo ah annagu gebi ahaan khamri ma cabno. Finland meel kasta ayaad ku arkeysaa, waxaa kale oo joogto loo arkayaa dad aad u cabsan. Waxey kugu caayi karaan oo kaliya muuqaalkaada dartiis”, nin Soomaaliya ka soo jeeda ayaa sidaas yiri.
Si kastoo ay ahaataba dhaqanka khamriga ee Finland waa mid nadiifoobay. Dadka sida gaarka ah diinta ugu dhegganse waxaa ku adkaan karta in ay fahmaan isticmaalka khamriga ee Finland.
”Waxaa jira dad badan oo marnaba dooneyn in ay wax ku darsadaan dadka khamriga caba, dadka aad diinta ugu dheggan waxey u arkaan dad xun waana ka xumaadaan. Inkastoo aysan Kurdida wax weyn la aheyn oo aan anigu xittaa yara cabo, caado nooma ahan in qofku sakhraamo. Wax lala yaabo ayeey u muuqataa in qof sakhraansan lagu arko wadada”, nin asal ahaan Kurdi ka soo jeeda oo Finland deggan ayaa sidaas yiri.
codsiga megangelyda qoys